Been abuur sababay in diyaarad hawada ku jirto ay dib ugu laabato halkii ay kasoo kacday - BBC News Somali
Been abuur sababay in diyaarad hawada ku jirto ay dib ugu laabato halkii ay kasoo kacday
Duulimaad kamid ah shirkadda duulimaadyada ee American Eagle oo ka ambabaxday Magaalada Pensacola, kuna sii jeeday Miami ee dalka Mareykanka ayaa dib ugu soo laabatay isla garoonkii ay ka kacday saacado un kadib markii iyadoo hawada ku jirtaay ay lasoo daristay arrin lala yaabay.
Haweeney kamid ahayd rakaabkii diyaaradda saarnaa ayaa markii ay diyaaradda hawada gashay waxaa ay dalbatay in la siiyo kursi ka wanaagsan midkii ay fadhiday.
Booliska Pensacola ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in shaqaalihii saarnaa diyaaradda ay haweeneydi u sheegeen in aysan suurtagal ahayn in ay hesho kursi ka weyn midkii loo jaray, balse daqiiqado kadib haweeneydii ayaa iska dhigtay qof xanuunsan, si ay markale u hesho dalabkeedi, taas oo keentay in shaqaalihii diyaaradda ay go'aansadaan in diyaaradda dib loogu celiyo halkii ay kasoo duushay.
Shirkadda ayaa sheegtay in dib laga ogaaday in haweeneydaas aysan xanuunsaneyn, waxaana markii ay diyaaradda dib gu laabatay halkii ay ka timid ay shaqaalaha diyaaradda u sheegeen booliska in ujeedka ugu weyn ee haweeneydaas ay ahayd sidii ay u heli laheyd kursi ka weyn midkii ay fadhiday.
Image caption Diyaaradda America Eagle
War qoraal ah oo ka soo baxay shirkadda duulimaadyada ee American Eagle ayaa lagu sheegay in duuliyihii diyaaradda uu go'aansaday in uu dib ugu laabto halkii uu ka yimid, si daaweyn degdeg ah loola gaaro haweeneydii sheegtay in ay xanuunsan tahay, inkastoo markii dambe la ogaaday in aysan waxba ka jirin.
Shirkadda ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in shidaal uu ka gubtay, wakhti badan uu kaga lumay duuliimaadkaas, iyagoo sheegay in ay ka fikirayeen xaaladda caafimaad ee haweeneydaasi.
Kadib markii ay diyaaradda dib ugu soo laabatay halkii ay ka kacday saacad kahor, haweeneydii ayaa diiday in ay diyaaradda ka degto, taaso keentay in booliska ay soo farageliyaan.
Afhayeen u hadlay booliska ayaa sheegay in markii dambe booliska iyo duuliyihii diyaaradda ay haweeneydii sheegtay in ay xanuunsaneyd ku qanciyeen in ay degto, waxaana markii ay degtay la wareegay booliska oo geeyay xarun lagu baaro xanuunada dhimirka.
Haweeneydan oo aan magaceeda la sheegin ayaa haatan waxaa gacanta ku haya laamaha ammaanka ee dalka Mareykanka, waxaase aan la ogeyn in maxkamad lasoo taagi doonaa iyo inkale.